Candy · Febroary 2011 · Global Voices teny Malagasy
Yemen28 Febroary 2011
Ny Filohan'i Yemen, Saleh dia nanomboka nandefitra tamin'ireo mpanohitra, tamin'ny fanomezana baiko ireo hery fiarovana ny mba hiarovana ny mpitolona. Nefa toa tsy vonona ny handray izany teniny izany ny ankamaroan'ny olona. Mandritra izany, mitohy ireo tolona goavana manohitra ny fitondràna. Mety ho voatsapa ny fahatsaram-panahin'ny governemanta amin'ny diabe nomanin'ny...
Afrika Mainty20 Febroary 2011
Olona 30 fara-fahakeliny no maty tamin'ny fipoahana baomba maromaro taorian'ny loza tamin'ny Alakamisy vao mangiran-dratsy tany amin'ny toby miaramilan'ny Gongo la Mboto any Dar es Salaam, Tanzania. 22 fara-fahakeliny ny olona maty tamin'ny 2009 taorian'ny fipoahana baomba mahatsiravina tany amin'ny toerana fametrahana ny fitaovam-piadiana tany amin'ny toby miaramila any Mbagala...
Mafana fo Ejiptiana sy teratany Tandrefana hafa koa no nampiasa ny fitenin'ny media sosialy hanaovana hatsikana mba hitantarana ny zava-nisy araka ny nitrangàny. Mitosatosaka koa ireo kaonty hosoka ho an'i Mubarak, ary nitazona ny moraly ho ambony ireo hosoka ireo tamin'ny tenifototra #jan25 Twitter, na tamin'ireo fotoana maizina nisian'ireo fifandonana...
25 Janoary 2011 no andro nidinan'ny vahoaka ejiptiana an-dàlam-be, tonga avy amin'ny faritra maro hanao fihetsiketsehana manohitra ny filoha Mubarak sy ny fitondràna eo an-toerana. Nafana ny fampiasan'ireo mafana fo ireo sehatra sosialy amin'ny aterineto sy vohikala mba hanentanana ny tanora sy hampitàna ny hafatra mialoha ny 25 Janoary. Tamin'ny...